‘चार जनाले खेतमै लडाएर लुगा खोल्न थाले, बचाउ-बचाउ भन्दै चिच्याउँदा कसैले सुनेनन्’ – Chautari Online
‘चार जनाले खेतमै लडाएर लुगा खोल्न थाले, बचाउ-बचाउ भन्दै चिच्याउँदा कसैले सुनेनन्’
September 17, 2020 607
सप्तरी । सामूहिक ब-लात्का-रमा परेकी सप्तरीकी एक १७ वर्षीया किशोरीलाई ‘पञ्च’ ले मेलमिलापका लागि दबाब दिएपछि झु न्डिएर आ त्मह त्या गरेकी छन् । गाउँका भद्रभलाद्मी समेतले पञ्चकै पक्षमा लागेर प्रहरीमा उजुरी गर्न नदिएर रकममा मेलमिलाप गर्न दबाब दिएपछि उनले ज्यान फालेकी हुन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सोमबार बिहान डाकनेश्वरी नगरपालिका–७ ललितपुरकी १७ वर्षीया संगीता मण्डलको स्थानीय चार युवाले सामूहिक ब-लात्कार गरेका थिए । सोमबार बिहान धानखेतमा लगाएको पानी हेर्न गएकी किशोरीमाथि सामूहिक ब-लात्कार भएको पीडितकी आमाले बताएकी छन् । उनका अनुसार आरोपित चार जनाविरुद्ध उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय जान खोज्दा पञ्चको भेलाले रोकेका थिए । त्यसपछि छोरी निकै तनावमा परेको उनले बताइन् ।
पीडित संगीताले आमालाई बताएअनुसार सोही ठाउँका धर्म मण्डल (३०), विष्णु मण्डल (३५), रञ्जित मण्डल (१८) र बब्लु मण्डल (१९) सहभागी थिए । उनीहरूमध्ये धर्म र विष्णुले ब-लात्कार गरेको र अरू दुई युवाले प्रयास गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि देखाएको छ । घटना बिहानको करिब नौ बजेतिर भएको उनकी आमाले बताइन् । किशोरी हिलो लागेको र-गतपच्छे अवस्थामा रुँदै घर आएपछि घटनाका बारेमा परिवारले थाहा पाएको थियो । उनको घरमा आमा र उनका दाइ मात्र छन् । बाबु बितिसकेका छन् भने अर्का दाजु वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरू अति विपन्न परिवारका भएकाले गाउँमै बटियामा खेत लिएका थिए । सो दिन उनी धानखेतमा पानी धेरै भए आली काटेर बगाउन गएकी थिइन् ।
हातका चुरा फुटेका र कपाल पूरै फुकेको अवस्थामा घर आएकी थिइन् । धेरै बेरसम्म एकनास रोइरहिन् र चार जनाबाट आफू बला-त्कृत भएको सुनाउँदै गर्दा उनी बेहोस भएको पीडितकी आमाले रुँदै बताइन् । ‘चार जनाले पछाडिबाट समातेर खेतमै लडाए । वरपर अरू कोही थिएनन् । लुगा फुकाल्न थालेपछि जोरजोरले चिच्याउन खोजे पनि कसैले सुनेनन्’, पीडितले बताएको कुरा सुनाउँदै उनकी आमाले भनिन्, ‘मुख बन्द गरिएको थियो । आवाज नै बाहिर गएन । बला-त्कारीहरू जबर-जस्ती गरेर फर्किए । उनी घटनास्थलमै एकछिन बेहोस भइन् र जसोतसो उठेर घरसम्म आइन् ।’
घटनापछि उनकी आमाले गाउँबाटै सहयोग पाउने अपेक्षाले समुदायका मुख्य व्यक्तिलाई बोलाइन् । जसलाई तराईका जिल्लाहरूमा ‘पञ्च’ भनेर बोलाउने गरिन्छ । भेला भएका आठ जना पञ्चले आरोपितहरूबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने र पीडितले कतै उजुरी गर्न नपाउने ‘फैसला’ सोमबार दिउँसो दुई बजेतिर सुनाइदिए । पञ्चहरूकै अगाडि आमाछोरी दुवैले त्यसको विरोध गरे पनि उनको कुरा कसैले सुनेनन् । पञ्चले चारै जना आरोपितलाई जनही २५÷२५ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने फैसला गरेका थिए ।
पञ्चले एक जनाको इज्जत ठूलो कि सिंगो गाउँको भन्दै पीडितलाई धम्क्याएका थिए । प्रहरीमा उजुरी गरे साक्षी प्रमाण जुटाउन नसक्ने भएकाले चुपचाप रहन उनीहरूले चेतावनी दिएको पीडितका छिमेकी बताउँछन् । उजुरी गरे किशोरीकै बदनाम हुने, त्यसले बिहे पनि नहुने, आरोपितबाट पाउने क्षतिपूर्ति पनि छुट्ने भन्दै घटना बिर्सिन गाउँका ‘जान्ने–बुझ्ने’ ले भनेपछि किशोरी तनावमा परेकी थिइन् ।
पीडित किशोरी र आमाले मंगलबार प्रहरीसमक्ष उजुरी दिने निष्कर्षसमेत निकालेका थिए । सोमबार दिनभर निक्कै विक्षिप्त रहेकी ती किशोरीले सोही राती सलको पासो लगाइन् । आरोपित चारै जना फरार भएका छन् । प्रहरीले पञ्चहरूमध्ये तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पञ्चायतीमध्ये जयकान्त मण्डल, वासुदेव मण्डल र सत्यनारायण मण्डललाई इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले पक्राउ गरेको छ ।
सप्तरी प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले उनीहरूलाई ब-लात्कार मुद्दामा मतियारको भूमिका खेलेको, प्रमाण नष्ट र आ-त्मह त्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान सुरू गरिएको बताए । ‘जबरजस्ती गरेर दबाउन खोज्नेले भोलि अरूलाई पनि यस्तै नगर्लान् र ?’, पीडितकी आमाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा पुर्याउनेहरूलाई कडा दण्ड सजाय होस् भन्ने चाहना छ । तर, म एक्लै के गरुँ ? के गर्नेुपर्ने हो ? त्यो पनि थाहा छैन ।’ गाउँलेबाट त्यस्तो होला भन्ने कल्पनासमेत नगरेको उनले बताइन् ।
जिल्ला प्रहरीका इन्स्पेक्टर सन्तोष खड्काले घटनास्थलमा पीडितले जोगिन संघर्ष गर्दा धान मडारिएको, चुराहरू फुटेको पाइएको बताए । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको शव परीक्षणको विस्तृत रिपोर्ट आइसकेको छैन । प्रारम्भिक रिपोर्टमा ब-लात्कार भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
Prevट्रक ड्राइभरसँग ३ हप्ता अफयेर, गर्भवती बनाएर भागेपछि १८ वर्षकी सरिताको बिचल्ली
Next२४ घण्टामा देशभर १२४६ कोरोना संक्रमित थपिए>>
मैले बिसौँ तिजका निराहार व्रत बसेकी छु तिम्रो लागि : मनोज तिमी उठ, “छोराछोरी तिम्रो बाटो कुरेर बसेका छन्”